Nilaza Tamin’ireo Mpampianatra Ambony Momba Ny Fivavahana i Poutine fa “Nanan-talenta” i Goebbels · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2014 8:36 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Español, Français, polski, English
Vladimir Putin nihaona tamin'ireo tompon'andraikitra ara-pivavahana tamin'ny 9 Jolay 2014, Moskoa. Sampan-gazety Kremlin, sary azon'ny rehetra ampiasaina.
Rehefa miatrika fahaiza-mandanjalanja sy ny fitondrana ny marina, matetika ny fahaiza-mandanjalanja no fahendrena kokoa amin'izy roa ireo. Na dia izany aza, misafidy ny fahamarinana mihoatra ny fandanjalanjana i Poutine raha niantso an'i Joseph Goebbels, minisitry ny Fampielezan-kevitry ny Nazi ho “lehilahy mana-talenta” nandritra ny fivoriana niarahana tamin'ny delegasionin'ny raby (jiosy) iraisam-pirenena. Momba ny fandisona ny tantara, nilaza ny filoha Rosiana hoe:
Nilaza ianao fa ketrina ny olona mandà izay zava-nitranga. Fantatrao, mino aho fa tsy tokony ho ketrina ihany ny olona, fa tsy mahalala menatra koa, raha mandà izay nitranga. Saingy indrisy, tahaka ny tamin'ny 70 taona lasa, matetika mahatratra ny tanjony izany tsy fahalalana menatra izany. Na izany aza, nilaza i Goebbels hoe: “Arakaraky ny tsy mahamarina ny lainga no inoan'ny olona azy.” Ary nandaitra tokoa izany; lehilahy nana-talenta izy.
Ny zavamisy mifandraika amin'ilay tenin'i Poutine dia ny lalàna iray nampidirin'ilay solombavambahoaka ao amin'ny Douma, Irina Yarovayaa , izay lany tamin'ny volana Mey izay mahatonga ny “fanomezan-drariny ny Nazisma” na “famerenana ny voninahitry ny Nazisma” ho azo saziana hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina na onitra mety ho tafakatra hatramin'ny 15 0000 dolara. Ilay lalàna dia manasazy izay rehetra fandavana ny fisian'ny zavamisy najoron'ny Tribonalin'ady Iraisam-pirenena tamin'ny fiafaran'ny ady lehibe faharoa, ny fankatoavana ny heloka Nazi, na ny fampielezana lainga mifandraika amin'ny fihetsik'i URSS nandritra ny ady. Nanoratra ny lalàna i Yarovaya nandritra ny fanafintohinana tao amin'ny Dozhd TV nanao fitsapa-kevitra mangataka amin'ny mpijery raha tokony nanaiky resy tao Leningrad ny Sovietika.
Nandika lalàna ve i Vladimir Poutine raha nankasitraka ny “talentan'” i Goebbels?
Ny zava-misy dia marina ny an'i Poutine. Lehilahy nana-talenta i Goebbels. Nahombiazana tamin'ny fampielezan-kevitra nandresen-dahatra ireo Alemàna an-tapitrasany hitia an'i Hitler sy hankahala ny Jiosy izy. Ary rehefa voalaza ny marina, dia nampiaininy ny ohabolany fa araka ny haben'ny lainga no hinoana azy. Misy ny manontany hoe aiza ho aiza ny miteraka adihevitra. Saingy niteraka resabe tao amin'ny RuNet ny teny fanatsarana nataon'i Poutine hoan'i Goebbels mpanao fampielezan-kevitra Nazi.
Tsy afaka nanakana ny tenany i Poutine. Nanansohaso an'i Goebbels izy nandritra ny fihaonana tamin'ireo raby. “Lehilahy nana-talenta i Goebbels ary nahavita tsara hatrany.”
Izany hoe, hoan'i Poutine, lehilahy mahafinaritra i Goebbels, saingy fasista sy banderovtsy – izany aho sy ny olona mieritreritra tahaka ahy. Eny, ekena. 🙂
Mpisera LJ, rovego nihevitra fa diso fiantefa ny fanehoan-kevitr'i Poutine, ary nilaza fa mampiseho ny taonany ity filoha 61 taona ity.
Toa mihaantitra i Poutine. Nisafidy tsara ny teny lazainy izy taloha. Marika ratsy izao.
Tsy ny rehetra ao amin'ny Twitter no nanaiky fa fanafintohinana ny fanamarihan'i Poutine.
Nahoana no mamely an'i Poutine ny rehetra? Eny, mpanao fampielezan-kevitra sy mpitarika nana-talenta i Goebbels. Mety tsy mana-talenta ny vendrana?
Ny sasany kosa tsy nahatana ny fampiasan'i Poutine ny fehezanteny Nazi tao amin'ny fanambarana ho misy ifandraisany amin'ny fomba fampielezan-kevitr'i Rosia. Mampitaha an'i Goebbels amin'i Dmitry Kiselev, feo manjaka ao amin'ny haino aman-jerin'i Rosia amin'izao fotoana, nanana filazana toy izao ny mpisera Twitter:
Mana-talenta kokoa noho i Kiselev i Goebbles